प्रथम गल्कोट साँस्कृतिक महोत्सवमा दर्शकहरु बढेपछी आयोजकहरु उत्साहित ! – ebaglung.com
प्रथम गल्कोट साँस्कृतिक महोत्सवमा दर्शकहरु बढेपछी आयोजकहरु उत्साहित !
२०७४ आश्विन २९, आईतवार १०:५१	Top News, थप समाचार
थम्मन थापा सन्देश, गल्कोट २०७४ असोज २९ । समग्र विकासको लागि नयाँ परिकल्पना भन्ने मुल नाराका साथ बागलुङ जिल्लाको गल्कोट नगरपालिकाको मजुवा फाँटमा असोज १८ गतेदेखि सञ्चालित प्रथम गल्कोट सांस्कृतिक महोत्सवमा शनिवार पनि दर्शकहरुको ओईरो लाग्यो। महोत्सवको ११ औं दिन सम्म आईपुग्दा २३ हजार भन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गरेका छन भने १ करोड बढिको आर्थिक कारोबार भईसकेको आयोजक संस्था हिमालयन म्युजिकल ईभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि पोखराका सचिव मोहन केसीले बताए । हिँजो शनिवार मात्रै ४० लाख भन्दा बढीको कारोवार भएको उनले बताए ।
महोत्सवले गलकोट हटिया बजारमा चहलपहल समेत ह्वात्तै बढेको छ । महोत्सवमा दैनिक रुपमा दर्शकहरुको उपस्थिति बढ्दै गएपछि आयोजकलाई उत्साहित समेत बनाएको छ । महोत्सव अवलोकन गर्न आउने दर्शकहरुले प्रतिव्यक्ति ७० रुपयाँ प्रवेश शुल्क दिनुपर्छ । यसरी शनिवार सम्म आयोजकलाई २३ हजार दर्शकबाट प्रवेश शुल्क बापत मात्रै १६ लाख रुपयाँ भन्दा बढी आम्दानी भएको छ ।
महोत्सवको ११ औ दिनको कार्यक्रममा गलकोट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत प्रदिप चन्द्र सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
१२ वर्ष पछि गल्कोटमा महोत्सव आयोजना गरिएकोले महोत्सवमा दर्शकको अत्यधिक भीडभाड भएको महोत्सव आयोजक मुल समारोह समितिका संयोजक हर्क पाण्डेले ईबागलुङ लाई बताए । महोत्सवमा प्रत्येक दिन ख्यातीप्राप्त कलाकारहरुको सांगीतिक प्रस्तुति रहेको छ । महोत्सवमा दर्शकहरुको रोजाईमा यहि सांगीतिक प्रस्तुती रहेको छ ।
आज चर्चित कलाकारहरु विष्णु खत्री, ईश्वर सिंह, राम्जी पौडेल, प्रदिप त्रिपाठी, चोलेन्द्र पौडेल, उमादेवी खनाल लगायतको सांगीतिक प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा भोली चर्चित कलाकारहरु दुर्गेश थापा, चोलेन्द्र पौडेल, देव साहानी लगायतको साँगीतिक प्रस्तुति रहने संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए।
नगद रु १ लाख २ हजार पुरस्कार राशीको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा १६ समुहको सहभागिता रहेकोमा जीवन फेसन हटियालाई पराजित गर्दै गल्कोट मोर्डनाईज एकेडेमी हरिचौर फाईनलमा प्रवेश गरेको छ । आज थ्रि ब्रर्दश अटो वर्कसप हटिया र भण्डारी ओभरसिज काठमाण्डौ बिच खेल हुने
कार्यक्रम आगामी असोज ३० गते सम्म हुने बताईएको छ । महोत्सवमा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, खुल्ला डान्स च्याम्पियन गलकोट आईडल, खुल्ला रत्यौली गीत प्रतियोगिता समेत सञ्चालन गरिएको छ । महोत्सवमा विभिन्न स्टलहरु सॅगै मनोरञ्जनको लागि पिङहरु समेत राखिएको छ ।
तिहारको मुखैमा प्रहरीले बेनीमा जुवाको खालबाट ७ जना पक्राउ गरेपछी जुवाडेहरु थर्कमान !
मातृभूमि सहकारीको साधारणसभा : दीगो विकासका लागि जुटौ – जि.सी.